सिस्नो खाँदा हुने अद्भुत फाइदाहरु ! - Laltin Media
Home»लाईफस्टाइल»सिस्नो खाँदा हुने अद्भुत फाइदाहरु !
सिस्नो खाँदा हुने अद्भुत फाइदाहरु !
By Anisha Khatri April 7, 2022 Updated: April 7, 2022 No Comments3 Mins Read
सिस्नोलाई अङ्ग्नेजीमा नेटल(Stinging nettle) भनेर चिनिन्छ । यो वनस्पति नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्र तथा उपत्यकामा पाइने अट्रिक्यसी परिवारको पोल्ने झार हो । यसमा औषधिय गुण रहेको हुन्छ । यसलाई उमालेर खान सकिन्छ । यसमा हुने रौंजस्तो झुसमा हुने फर्मिक अम्ल(Formic acid)ले पोल्ने र हिस्टामाइन(Histamine)ले सुन्निने भएकोले पीडादायक हुन्छ तर पानीमा उमालेपछि ती तत्वहरू नास भएर जान्छन् । यसको सोहि दुर्गुणको कारण पहिले पहिले यातना दिन तथा सजाय दिन यसको प्रयोग गरिन्थ्यो ।
सिस्नो भन्ने बित्तिकै गरिबको खाना अर्थात् हेपिएको खाना भनेर बुझिन्छ। गरिब-दुःखीले ‘सिस्नोको खोले खाएको’ भन्दै यसलाई अभावको बेला प्राण धान्ने खान्कीको रुपमा लिने गरिन्थ्यो। तर पछिल्ला दिनमा सिस्नो धनीले पनि औषधि सम्झेर खोजी-खोजी खान थालेका छन्।
कुनै बेला अभावमा छाक टार्ने सिस्नो अहिले केही पाँचतारे होटलको मेनुमा पनि समावेश भएको छ। त्यतिमात्र होइन, यो झोलिलो खानेकुराले स्वाद र स्वास्थ्य दुवैलाई लोभ्याउँदै छ। गजब त के छ भने, सिस्नो हाम्रो पाखापखेरामा जताततै पाइन्छ। यो सस्तो अनि सुलभ पनि छ। त्यसमाथि, अहिले हामीले खाने खाना जसरी विषाक्त हुँदै गएको छ, सिस्नोमा त्यति भएको छैन। किनभने सिस्नो विशुद्ध अर्ग्यानिक उत्पादन हो। यसको उत्पादनमा न किटनाशकको प्रयोग गर्नुपर्छ, न यसको लागि कृत्रिम भण्डारणको खाँचो नै छ।
सिस्नोमा हुने भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी, फलाम तत्त्व, पोटासियम, म्यागानिज, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक पदार्थको कारण उत्तरी तथा पूर्वी युरोपमा यसको झोल लामो समय देखि प्रचलित छ।
सिस्नोमा २५ प्रतिशतसम्म प्रोटिन हुन्छ। त्यसैले यो शाकाहरीहरूको लागि अति उत्तम भोजन हो। यो अति मूल्यवान ‘गउडा चिज’ र यार्गमा स्वादको लागि प्रयोग गरिन्छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको वृद्धि तथा अन्य झारहरूको वृद्धिले सिस्नो पहिले जस्तो जताततै पाइँदैन।
सिस्नो खाँदा हुने फाईदहरु यस प्रकार छन् :
– सिस्नोले मुटुसम्बन्धी समस्यालाई निको पार्नका लागि सहयोग गर्छ।
– यो मधुमेह रोगीका लागि पनि निकै उपयोगी हुन्छ।
– सिस्नो गर्भवती तथा सुत्केरीलाई समेत खुवाइन्छ। उनीहरुका लागि सिस्नो अति फाइदाजनक मानिन्छ।
– उच्च रक्तचापको समस्या छ भने पनि सिस्नोको सेवन गर्दा हुन्छ। यसले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्नमा सहायता पुर्‍याउँछ।
– प्रोस्टेड ग्लाण्ड र बाथको समस्या भएका मानिसलाई पनि सिस्नोले राहत प्रदान गर्छ।
– सिस्नो छाला र कपालका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ। यसले अनुहार चम्किलो बनाउनुका साथै दाग हटाउनको लागि पनि मद्दत पुर्‍याउँछ।
– यसले कपाल सिल्की बनाउन सहयोग गर्छ भने कपाल झर्नबाट रोक्ने काम गर्छ।
– सिस्नोले शरीरमा रगतका नयाँ सेल बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले डिएनए क्षयीकरण हुनबाट समेत रोक्ने काम गर्छ।
– पिसाबको संक्रमण हुनेहरुले पनि नियमित सिस्नो सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ।
– शरीरमा भएका विभिन्न एलर्जीको समस्या समाधानमा पनि सिस्नोले मद्दत गर्छ।
– शरीर दुख्ने समस्याको उपचार गर्नु छ भने पनि आजैबाट नियमित सिस्नोको प्रयोग गर्दा उत्तम हुन्छ।
– यो मानिसको लागि मात्र नभई जनावरका लागि पनि स्वस्थकर मानिने अनुसन्धानले देखाएको छ। गाई-भैंसीलाई सिस्नो खुवाउँदा निरोगी हुनुको साथै दूध पनि बढी दिने गर्छ।
– सिस्नोको फूल र जरा कुखुरालाई खुवाएर अण्डा उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ।
– सिस्नोमा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन सी, फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, फाइवर, फस्फोरस र फलामजस्ता तत्त्व पाइन्छ।